१० श्रावण २०७५, बिहीबार ११:२९
पोष्कर बि.क., विगत लामो समयदेखि तुलसीपुर “ख” लाईनमा डि.आर. कपडा रिपेरिङ सेन्टर खोलेर बस्नुभएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ८ दुधेनाका बिकसंगको कुराकानी मालागिरी बहसमा ।
१. कस्तो छ व्यवसाय ? किन रोज्नुभयो यो क्षेत्र ?
– अहिलेसम्म राम्रो छ ग्राहकहरु आइरहनु हुन्छ । सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ, साथीभाईहरुले पनि सहयोग गर्छन् । यो व्यवसाय रोज्नुको कारण सानैमा ईण्डिया गए त्यहाँ गार्मेन्टको काम १० वर्ष जति लगाएर काम सिके अनि नेपाल फर्किए । आफुले जानेको काम यहीँ थियो यसैले यो क्षेत्र नै रोजे ।
२. व्यवसायबाट कत्तिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ? कस्ता छन् चुनौतीहरु ?
– पहिला पहिला त कोठाभाडा तिर्न समेत हाम्य हाम्य हुन्थ्यो कहिले त सोच्थे विदेश जाउ भनेर १/२ पटक बाहिर जाने प्रयास पनि गरे तर मनले मानेन र मेहनतका साथ यसैमा लागे अहिले सबैले चिन्नुभएको छ । सबै यहीँ आउनुहुन्छ सन्तुष्टि छु अहिले । चुनौतीहरु त धेरै नै छन् विशेषत म यहाँ नयाँ कपडा भन्दा पुराना कपडाहरु धेरै सिलाउने गर्दछु । कहिले केही बिग्रेला र गाली पाईएला भन्ने चुनौती कहिले कसरी व्यवसायलाई टिकाईराख्ने भन्ने चुनौती ।
३ व्यवसायलाई अझै माथि उठाउन के गर्नुपर्ला ? कतिको आम्दानी हुन्छ यो पेशामा?
– व्यवसायलाई माथि उठाउनका लागि सर्बप्रथम त आफु लगनशील हुन जरुरी छ । बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै सोहि अनुरुपको सामनहरु उपलब्ध भयो भने व्यवसाय थप माथि उठ्ने थियो । अहिलेसम्म राम्रो छ ४ जनाको परिवार पालेको छु छोराछोरीले बोर्डिङमा पढ्छन्। बिदेशमा बसेर अरुको काम गर्नु भन्दा स्वदेशमा बसेर आफ्नो काम गरि परिवारसँग बस्न पाएको छु यहीँ नै मेरो ठुलो आम्दानी हो ।
रीमा सोमयी मगर, विगत लामो समयदेखि डान्सिङ र मोडलिङ क्षेत्रमा लागि आफ्नो उज्जवल भविष्य खोजिरहेकी बाघमारे १ खिलतपुरकी मगरसंग गरिएको कुराकानी मालागिरी बहसमा ।
१. किन यो क्षेत्र नै रोज्नुभयो ? मोडलिङ रुचि कि शोख ?
– मलाई सानैदेखि गीत संगीत मन पथ्र्यो टिभीमा अरुको नाचेको देखेर म आफै नाच्ने गर्थे । गाउँघरमा पनि भैलो खेल्दा म नै अघि सरेर नाच्थे । पछि बिस्तारै ठुलो भए । म पनि पर्दामा देखिन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर पलायो त्यसपछि मैले केही महिना तुलसीपुर डान्स सिके अनि यो क्षेत्र रोजेकी हुँ । मेरो लागि मोडलिङ शोखभन्दा पनि रुचि नै हो ।
२. कति भयो यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको ? कतिवटा भिडियोमा अभिनय गर्नुभएको छ ?
– ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो क्षेत्रमा लागेको चाहिँ ३ वर्ष जति भयो तर मोडलिङ र डान्स सिक्न थालेको भने ५ वर्षजति भयो । अहिलेसम्म कभर भिडियोहरु २/३ वटा अनि एउटा अफिसियल भिडियो सार्वजनिक भैसकेको छ भने आउने तयारीमा रहेको एउटा अफिसियल भिडियो छ । केही भिडियोहरुमा अभिनय गर्ने क्रम जारी छ ती भिडियोहरु पनि बिस्तारै बजारमा आउनेछन् ।
३. मोडलिङ क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरु छन् ? विकृतिलाई हटाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
– मोडलिङ क्षेत्रमा विकृतिहरु त धेरै छन् म नयाँ नयाँ भएकोले पनि मैले अझै सबै विकृतिहरुलाई देखेको छैन् तर हामीलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण फरक छ, अरु ब्यक्तिले हेर्ने नजर फरक छ । सबैमा अहिले नकारात्मक सोच पलाएको छ । यसले गर्दा पनि यो क्षेत्र संकुचित हुँदै गईरहेको छ । अब यसलाई हटाउन सबैभन्दा पहिले मानिसहरुमा सकारात्मक सोच पलाउन जरुरी छ ।
हेमन्त बस्नेत, विगत लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनु भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ का बस्नेतसंग गरिएको कुराकानी मालागिरी बहसमा ।
१. व्यवसायका चुनौतीहरु के के हुन ? किन व्यवसाय नै रोज्नुभयो ?
– व्यवसायका मुख्य चुनौती भनेको बजार व्यवस्थापन हो । राम्रो तरिकाले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एक ठुलो चुनौती हो । बजारको मागअनुसार पूर्ति गर्नु अर्को चुनौति हो । व्यवसाय सरल अनि दीर्घकालीन हुने भएकाले साथै स्थानीय ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसाय पेशा रोजेको हुँ ।
२. व्यवसायमा देखिने समस्या न्युनीकरण कसरी गर्न सकिएला ?
– व्यवसायमा अहिले धेरै किसिमका समस्याहरु देखिएका छन् प्रतिस्पर्धात्मक जमाना भएको कारणले गर्दा व्यवसायीहरु घाटामा कारोबार गरिरहेका छन् । बजारमा ब्यापारको सन्तुलन बिग्रिएको छ जसले गर्दा व्यवसाय झन धरासायी बन्दै गएका छ। यसका लागि उद्योग बाणिज्य संघले राम्रो नीति ल्याएर समस्या न्युनीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ साथै स्वयं व्यवसायी पनि नयाँ ब्यापारमा संलग्न हुनुपर्छ तबमात्र समस्याहरु पार लाग्न सक्छन् ।
३. कस्ता खालका ग्राहकहरु आउछन् ?
– प्रायःजसो सबै किसिमका ग्राहकहरु आउनहुन्छ । सबैको मागलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेसम्म ग्राहकलाई रित्तो हात फर्काएको छैन् । ग्राहकहरुमा पनि अहिले राम्रो समानको माग बढेको छ । स्थानीय स्तरका सबै ग्राहकहरु अहिलेसम्म आईरहनु भएको छ । ग्राहकको सन्तुष्टि नैं हाम्रो सन्तुष्टि हो जस्तो लाग्छ ।
“जेसिज सामाजिक काममा सक्रिय छ” – भण्डारी